७० वर्ष पुगेकाकाे बिमा रकम सरकारले बेहाेर्ने Archives - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । इन्टरनेटको मूल्य १३ प्रतिशतले बढाइएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक निकायहरु बुधबारबाट लागू हुने गरि इन्टरनेटको १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेका हुन। सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँँग गरेको सह
चितवन । विद्यालयलाई सरस्वतीको घर मानिन्छ । जहाँ कलिला मुनाहरुशिक्षा आर्जन गर्दै सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने गर्छन । विद्यालय जस्तोे पवित्र क्षेत्रलाई
चितवन । विद्यालयलाई सरस्वतीको घर मानिन्छ । जहाँ कल
एजेन्सी । दक्षिण पश्चिमी एसियाली मुलुक पाकिस्तानमा प्रत्येक दिन १५ देखि ३५ जना व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको छ ।जसको मतलब हुन् आउँछ, हरेक एक घण्टामा कम्ति...
२१ लाख वर्ष पुरानो मानव खोपडी भेटियो !
प्राकृति प्रकोप न्यूनिकरणमा पूर्व तयारी आवश्यक: गृहमन्त्री थापा ... See MoreSee Less
प्राकृति प्रकोप न्यूनिकरणमा पूर्व तयारी आवश्यक: गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरणका लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छ....
कस्तो मौद्रिक नीति ? ... See MoreSee Less
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न केही दिन ढिलो हुने भनिएको छ। धेरै ढिलाइ भएन भने यो ढिलाइले खासै...
इन्टरनेटको मूल्य १३ प्रतिशतले बढ्यो ... See MoreSee Less
काठमाडौं । इन्टरनेटको मूल्य १३ प्रतिशतले बढाइएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक निकायहरु बुधबारबाट लागू हुने गरि इन्....